Safaaradda Soomaaliya ee Magaalada Nairobi oo shaqada joojisay – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Safaaradda dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku leedahay Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ayaa joojisay dhammaan adeegyadii ay bixin jirtay, kadib markii dowladda ay si rasmi ah xiriirkii diblomaasi ugu jartay Kenya.
Qoraal kasoo baxay Safaaradda Soomaaliya ee Nairobi ayaa waxaa lagu sheegay in la joojiyey dhammaan adeegyadii ay Safaaradda bixin jirtay, isla markaana todobaadka soo socota Xarunta Albaabada la isugu dhufan doono.
Safaaradda ayaa sheegtay in dadkii horey loogu ballamiyay inay qaatan baasaboorrada lagu wargeliyay in Maanta berri oo khamiistii ah soo doontan baasaboorrada, sidaasina lagu joojin doono shaqadii loo haayay shacabka Soomaaliyeed ee Nairobi kunool.
“Iyadoo la fulinayo go’aanka dowladda, waxaa la hakiyay dhammaan adeegyadii safaaraddu bixinaysay. Qof kasta oo baasaboor dalbaday ama sugayay waxaan ogaysiinaynaa in uu soo doonto ugu dambeyn maalinta Khamiista ah.” ayaa lagu yiri ogeysiiska kasoo baxay safaraadda Soomaaliya ee Kenya.
Si kastaba dalka Kenya ayaa waxaa ku sugan dad Soomaaliyeed oo u badan, isla markaana waxaa saameyn ku yeelan doona Go’aankii dowladda Federaalka ay xiriirka ugu jartay dowladda Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay inay fara-gelin ku waday muddooyinkii ugu dambeeyay siyaasadda dalka, taasina ay keentay in xiriirka loogu jaro, waxaana sidoo kale dowladda ay Dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay Urrur Goboleedka IGAD.
Dowladda ayaa sidoo kale amartay in diblomaasiyiinta Soomaaliyeed iyo shaqaalaha eek u sugan Magaalada Nairobi ay dib ugu soo laabtan Magaalada Muqdisho, halka kuwo Kenyaanka lagu wargeliyay in 7 maalmood gudahood dalka uga baxaan.
Madaxweyne Saciid Deni oo fariin u diray dhammaan Hay’addaha Puntland